Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Dhalinyarada OYSU Faraca Xerada Qaxootiga Umkulu/Ertreya oo shir muhiima isugu yimid
Ururka Dhalinyarada OYSU Faraca Xerada Qaxootiga Umkulu/Ertreya oo shir muhiima isugu yimid
Waxaa xerada qaxootiga ee dalka Eretreya ku qabtay shir balaadhan oy ka soo qaybgaleen martisharaf badan Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU). Shirkan oo lagu xusayay sanadguuradii 10aad ee ka soo wereegtay aasaaskii Ururka Dhalinyarad iyo Ardayda Ogadenia ee Jaaliayad Mussawac xerada qaxootiga MUKULI Eritrea ayay xubna badan oo ka tirsan ururka ka soo jeediyeen hadalo isugu jira warbixin iyo guubaabo.
Dhalinayarada Xerada ayaa dadkii fadhiyay shirka uga xogwaramay xaaladda uu ku sugan yahay dalka Ogadenya iyo heerka uu marayo halganka gobanimadoon ee shacabka Somalida Ogadenya. Waxayna si faahfaahsan uga warameen taariikhda dalka Ogadenya iyagoo ku dheeraaday heerarkii kala duwanaa ee dalka Ogadenya uu soo maray. Waxay sheegeen in boqortooyadii Abysiinya oo garabsanaysa xoogaga isticmaarka ee reer Yurub ay ku soo duushay dalka Ogadenya. Waxay ka xogwarameen iska caabintii xoogantyd ee dadweynaha ay kala hortageen ilaa markii ugu dambaysay uu dalka qabsaday gumaysigii Ingriiska oo khiyaanay shacabka Somaliyeed ee Ogadenya oo si lama filaan ah dalkii ugu wareejiyay gumaysiga Itobiya.
Taariikhdaa ka dib waxay ka warameen xaaladda uu hadda ku sugan yahay dalka iyo dhibaatada uu ciidanka Itobiya ku hayo dadka shacabka ah, arintaasoo ay fahmi karaan martisharaftii ka kala socotay qaybaha kala duwan ee shacabka Eretreya ee dagan MUKULI oo shirka lagu martiqaaday.
Ugu dambayntii waxay dhalinyarada qaybiyeen bayaan ku qornaa Afka Ingriisiga oo nuqulkan hoose uu naga soo gaadhay. Xubnaha ururka ayaa ku balamay inay sii laba jibaaraan hawlihii ay ka wadeen Xerada iyo taageeradii ay u hayeen halganka shacabkooda.
Warqadii ay u qaybiyeen marti sharaftii la joogtay iyo saxaafadda: HALKAN RIIX.